IATA nghọta na ịkwụ ụgwọ ugbu a na ahịa Finland, Norway na Sweden
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » IATA nghọta na ịkwụ ụgwọ ugbu a na ahịa Finland, Norway na Sweden
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Finland na -agbasa ozi ọma • investments • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Technology • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
ATAtù International Air Transport Association (IATA) kwupụtara na etinyere Transparency in Payments (TIP) na ahịa Finland, Norway na Sweden. NDIPMỌD,, nke a na-ewebata ya na njikọta na NewGen ISS, bụ atụmatụ ụlọ ọrụ agbadoro anya n'inye ụgbọ elu na ịbawanye nghọta na njikwa na nchịkọta ahịa ha na-eme na ọwa ụlọ ọrụ njem. N'otu oge ahụ, ọ ga - enyere ndị ọrụ njem aka iji ụdị ịkwụ ụgwọ ọhụrụ maka izipụ ego ndị ahịa.
“Ọnọdụ dị ugbu a maka ọrụ ịkwụ ụgwọ agbanweela nke ukwuu, ndị egwuregwu ọhụụ na usoro ịkwụ ụgwọ na-apụta, na-enye ndị ọrụ njem ohere ka ukwuu iji nyefe ego ndị ahịa na ụgbọ elu. Agbanyeghị, ruo ugbu a, ụgbọ elu enweghị ọhụụ na usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọhụrụ a. NDIPMỌD will ga-eleba anya n'okwu a, na-ekepụta ohere ọhụụ maka ndị ụgbọ elu na ndị ọrụ njem, "Aleks Popovich, Onye isi oche Onye Isi Ala nke IATA, Ọrụ Ego na Nkesa.
Onweghi ụdị nnyefe a na-akwụ ụgwọ site na TIP, mana ndị ọrụ njem nwere ike iji ụdị ndị ahụ ụgbọelu nyeburu nkwenye. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ụgbọ elu kwadoro, TIP na-enye ndị ọrụ njem ohere iji kaadị kredit ha. IATA esoro ndi oru ntinye aka na ulo oru mepee TIP ka ha weputa:
Enwekwu nghọta na njikwa maka ọkpụkpọ ọ bụla
Usoro na ngwaọrụ dị mma iji nyere ndị ọrụ na ụgbọ elu aka ka ha kwekọrịta na iji usoro mbufe ndị ọzọ, dị ka kaadị akwụmụgwọ nke onwe ya na nọmba akaụntụ ezigbo ego nke ndị nnọchi anya (VANs), maka ịnyefe ụlọ ọrụ ụgbọelu nke inggba andgwọ na Mkpebi Mkpebi (BSP) ọrịre
Nhazi mkpebi nke kachasị mma maka usoro iwu na ọnọdụ ahịa.
N'okpuru NDIPMỌD,, ndị na-enye ụzọ ntụgharị ọzọ iji chọọ isonye na ụlọ ọrụ na-ezigara ndị ụgbọ elu nke ahịa BSP ga-esonye na IATA, ma nye ha ozi dị mkpa gbasara ngwaahịa ịkwụ ụgwọ ha. Ndị ọrụ na ụgbọ elu ga-enwe ike ịnweta ozi a na mkpa ịdị mkpa. “Anyị na-ele anya ka anyị na ndị na-eweta Alternative Transfer Methods dị ka AirPlus International na Edenred Corporate Payment na-arụ ọrụ, ndị na-akwado ụkpụrụ ndị bụ isi TIP. Anyị na-atụ anya na ndị ọzọ na-eweta ga-agba mbọ idebanye aha ha na ngwaahịa n'ime TIP kpuchie ozugbo ha oru gburugburu ebe obibi dị njikere, na-eme ka ukwuu nghọta na ụgbọelu na gị n'ụlọnga ilekota, ”kwuru Popovich.
N'ime izu ndị na-abịanụ, a ga-etinye TIP na Iceland na Denmark (9 Mee), Canada (16 Mee), na Singapore (23 Mee), na-ewepụta atụmatụ a ga-emecha na ahịa BSP niile site na Q1 2020.